Vondron’ny tantsaha rejionaly miisa 10 no nisitra ny famatsiam-bola valo hetsy dolara avy amin’ny fandaharan’asam-panjakana DEFIS. Famatsiam-bola izay ho tsinjaraina amina faritra telo, dia ny faritra Amoron’I Mania, Matsiatra Ambony ary Ihorombe. Raha ny antontan’isa, tanim-bary mitotaly 7000 ha sy tanim-boly katsaka 2000 ha no hisitraka famokarana matihanina vokatr’izao fanohanana izao. Sahan-tsekoly vary miisa 160 sy sahan-tsekoly katsaka miisa 80 ihany koa no ho apetraka amin’ireo faritra ireo. Tafiditra anatin’izao fanohanana izao ihany koa ny fampitaovana ireo tantsaha hiatrehana ny taom-pambolena lehibe araka ny nambaran’ny mpandrindra nasionalin’ny fandraharan’asam-panjakana DEFIS.
Ho atosika amin’ny sehatry ny fandraharahana ireo tantsaha araka ny nambaran’ny filoham-pirenena ny herinandro lasa teo nandritra ny fanokafana ny “Fier Mada”. Ho an’ny avy ao Ihorombe, efa azo antoka fa hivoatra ny asa fiarihan’ireo tantsaha noho izao fanohanan’ny programan’asam-panjakana izao, hiakatra tsinona ny taham-bokatra.
Tamin’ny zoma lasa teo moa no vita ny fifanekem-piaraha-miasa teo amin’ireo vondron’ny tantsaha sy ny fandraharan’asa Defis. Hisy ny fanaraha-maso isam-bolana fanantanterahana ny asa.